Gaas oo dib uga dhacey Shirka Kismayo [Sababta]
BOSSASO, Puntland - Madaxweynaha Dowlada Puntland ayaa dib u dhigey safar uu uga qayb gali lahaa kulan magalaada Kismaayo isugu imaan lahaayeen madaxda maamulada Somaliya kadib markii culeysyo siyasadeed kaga yimadeen qaar ka tirsan Xildhibanada Barlamanka iyo madaxda sare ee Puntland.
Warsidaha Garowe Online ayaa fahansan in kulamo maalmahaan uga socdey magalaada Bosaso qaar ka tirsan xildhibaano, gudoonka Barlamanka Puntland iyo Madaxweyne Cabdiweli Maxamad Cali Gaas aan lagu guuleysan in la isku afgarto kadib markii madaxweynihu ku adkeystey ka qayb galka kulanka Kismayo ka furmaya maalinta Axad, ee soo aadan.
Wararka ayaa sheegaya in arinku isbadalay kadib markii 3/10/2017 Madaxweyne ku xigeenka Puntland isaga oo ka duulaya garoonka magalaada Garowe saxafada u sheegey in kulanka Kismayo wax dan ah ugu jrin ka qayb galkiisa Dowlada Puntland Halkaan ka dhageyso taasoo ka careysiisey Madaxweyne Gaas sida warar lagu kalsoon yahay sheegayaan.
Garowe Online ayaa fahansan in labada mas’uul ee ugu sareeya Puntland aysan isku ogeyn hadalka saxafada loo gudibiyey taasoo xildhibaanadii culeyska saarayey Madaxweyne Gaas in uusan ka qayb galin shirka Kismayo ku noqotey waji Gabax.
GAROWE, Puntland- Ciidamo katirsan kuwa ammaanka Puntland ayaa caawa xabsiga u taxaabey Wariye Cumar Maxamed (Cumar Dheere) oo sidoo kale kamid ahaa Ururka Saxafiyiinta Puntland ee MAP.
Wariyaha ayaa loo gudbiyay xabsi ku yaalla Kantaroolka magaalada ee dhinaca Ko ...